अविच्युरीः जीवन सिकाउने किताब - खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsअविच्युरीः जीवन सिकाउने किताब
December 24, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, मुख्य समाचार, मैले चिनेको, म्यागजिन, शब्द 0
चार महिनाभन्दा धेरै भइसकेको थियो, म उनलाई भेट्न नगएको। जीवनलाई मूल बाटोमा ल्याउन म आफ्नै झिनामसिना सङ्घर्षहरूमा थिएँ। उहाँ स्वस्थ रहनुहुँदा फोन गर्नुहुन्थ्यो, ‘म बिरामी छु हेर्न आउँदैनस्?’
अनि म हतारिन्थे। हस्याङपस्याङ गर्दै पुग्थेँ र ‘सरी मुमा’ भन्थेँ। मुमा एकछिन रिसाउनुहुन्थ्यो। अनि भन्नुहुन्थ्यो, ‘तँ बिज्जी छस्, मलाई थाहा छ।’
‘मुमालाई सब्बै त थाहा हुन्छ,’ भनेर उनका गालाका चाउरीहरू मुसार्थेँ। अनि मात्र हाँस्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि पुग्थ्यौं जीवनका साँघुरा, फराकिला बाटाहरूमा। र त्यहाँ भेटिएका दुःख र सुख बाँड्थ्यौँ। तर कुराको केन्द्रमा साहित्य नै मूल रहन्थ्यो।
यसपल्ट न म भेट्न गएँ, न उनले फोन गर्नु भयो। यी महिनाहरूभित्र उनी कस्ता थिइन्, के गरिरहेकी छन्, म कस्तो छु, के के गरिरहेको छु, हामी दुवै बेखबर रह्यौँ।
आज बिहान उठ्ने बित्तिकै भाइ लेखनाथ छेत्रीले कथाकार समशेर अलीले उहाँ बित्नु भएको स्टाटस हालेको देखाए। मैले फेसबुक खोल्दा दाजु हिरा छेत्रीले त्यही दुःखद समाचार पठाएका थिए। आफ्नै प्यारी मुमा बित्नुभएको समाचार मलाई फेसबुकले दियो।
यतिखेर मभित्र हजारौँ कुराहरू छन्। सबैभन्दा अग्लो छ, ग्लानी र पीडा।
मुमा यत्रो दिन सिकिस्त हुनुहुन्थिन् भन्ने कुरा मैले पत्तो पाइनँ। खबरम्यागजिन-ले मलाई यसै पनि मिसिन बनाइसकेकै छ। केलेकेले मलाई अल्झाइदियो। हजारौँपल्ट म उनकै घरमुनिबाट कुदेँ तर मुमालाई भेट्न उक्लिनँ।
किन गइन म?
यही प्रश्नले मलाई बेस्सरी गाली गरिरहेको छ अहिले। यसैको ग्लानी छ।
मलाई उनी यसरी बितेर जानुहोला भन्ने कहिल्यै लागेन।
अन्तिमपल्ट मैले भेट्दा उनी भर्खर स्वस्थ हुनु भएको देखेको हुँ। भक्ति र म दुवैले भेटेर फर्किएका थियौँ।
प्रिय कुराहरू सँधै साथ रहँदैनन्। आज मसित मेरी प्यारी मुमा पनि सशरीर रहनुभएन। उनी बित्नु भयो तर उनले दिएको शिक्षा मसितै छ। उनले देखाएको बाटोमा नै छु। उनले चिनाएका दुःखहरूसित नै लडिरहेको छु। उनले कल्पना गरेको जीवन नै बाँचिरहेको छु।
उनकै सम्झनामा, धेरै पहिले लेखेको यो ‘याद’ खबरम्यागजिनका पाठकमा पुनः साझा गरिरहेको छु।
‘तपाईँले त जीवनलाई मज्जैले भोग्नुभयो,’ मैले मुमालाई सोधेँ, ‘के रहेछ हँ जीवन?’
मलाई निक्कै अघिदेखि सोध्न मन लागेको थियो। मैले भेट्दा उनको आँखामा कुनै पीडा थिएन। घर छेउको बारी कोपरिरहेको बेला पनि पोल्टोबाट निकालेर ‘ला, नानीलाई मिठाइ किनेर लग्दे’ भन्नुहुन्छ। कत्तिपल्ट त आरोहणलाई मिठाई किनेर लगिपनि दिएँ। कोहीबेलाचाहिँ गोजीमा कौडी हुँदैनथियो। कापकुप पारिदिन्थेँ। अर्कोपाली जॉंदा ‘लगिदिस्?’ भनेर सोधेको भए पक्कै म ढॉंट्ने थिएँ। मुमालाई जीवनबारे बोल्न मन त लाग्छ तर बोली काम्छ। कुनै पनि कार्यक्रममा बोल्नुहुन्न। कोहीबेला मैले नै उनको प्रतिनिधित्व गरेर उनले लेखेको चिर्कटो पढेर सुनाइदिएको छु कार्यक्रममा। कतिठाउँमा कथाकार विन्द्या सुब्बा, सुधा गुरूङ, सुधा राई वा कालेबुङकै कुनै लेखिकाले पढिदिन्छन्। निक्कैदिन देखा परिनँ भने फोनमा त्यही कॉंपेको स्वरमा हकार्नुहुन्छ-
मैले कविता लेखेको अनि पढेको खुब मनपर्छ मुमालाई।
उनलाई देखेपछि कुन्नि किन मलाई आफ्नै आमुई(हजुरमुमा) लाग्यो। अनुहारमा आमुईका झैँ चाउरीहरू छन्। त्यो मुसार्छु अनि आमुईलाई सम्झिन्छु। हातको छाला तान्छु। छाला तनन तन्किन्छ।
मुमाको जत्रो कद् छ, आमुईको उत्रै थियो। उनलाई भेटेपछि मलाई आमुईको याद आउँथ्यो। त्यहीँमाथि मुमा कवि। 40 को दशकदेखि नै भारतीय नेपाली साहित्य विकासमा लागेको योद्धा। त्यसैपनि आकर्षित बनेँ।
मुमा कुनै पनि साहित्यिक कार्यक्रममा जानुहुन्थ्यो, पहिलो ‘कल’ मलाई।
मुमासित हिँडेपछि मेरो पैसा खर्च नहुने। मुमालाई सम्मान गर्न साहित्यिक संस्थाहरूले बोलाउँथ्यो, म नै हुन्थेँ पुच्छरे।
सुन्नेहरूले मेरो नाम सुनेकै हुन्थे तर सशरीर देखेका हुन्थेनन्। देख्नेहरूले चिन्थे मलाई। मुमाले यसो भनिदिएपछि भने उनीहरूको अनुहारमा एउटा प्रश्न हुन्थ्यो, त्यो यस्तो छ-
म कालेबुङ बजार पत्रकारिता गर्न कालेबुङकै पल्लोछेउको कुलैन बगानबाट छिरेको केटो। गाउँमा मुमा, स्वास्नी र छोरो छोडेर आएको म। मेरो नाम त सुनेका तर मलाई नचिनेकाहरू धेरै थिए सहरमा। उमेश उपमा, शिबु छेत्री, असिम सागरहरूसित कालेबुङमा साहित्यिक काम गरिन्थ्यो। हाम्रा सबै कार्यक्रमका मुख्य अतिथि मुमा नै। मुमासित कविताले नै म नजिक भएँ। गाउँमा मुमा छोडेर आएको मैले सहरमा पनि मुमा भेटेँ। मेरो लेखनमा सम्भावना देखेर नै रहेछ, मलाई छोरो बनाइन्। साहित्यिक छोरो।
नेपाल र दार्जीलिङमा मलाई चिन्नेहरूलाई मुमाले मलाई डोहोर्याएको कुरा थाहा छैन। हो, मुमाले मलाई कविता लेख्न र सर्जकहरूसित सम्बन्ध स्थापित गर्न सिकाउनुभयो। मुमाको हात समातेर हिँड्दाहिँड्दै कवि बनेँ म। गइरहन्छु उनको घर। जब जान्छु, कोठामा बसेर घन्टौँ हामी सँगै साहित्यको सुर्ता गर्छौँ। जीवनको सुर्ता गर्छौँ। समाजको सुर्ता गर्छौँ।
‘यो गर्, त्यो नगर्, यो पढ्, त्यो नपढ्,’ मुमा भन्नुहुन्छ। म खुरुखुरू मान्छु।
‘यो खा, त्यो नखा, यो बोल्, त्यो नबोल्,’ मुमा भन्नुहुन्छ। म सप्पै फेरि खुरुखुरु मान्दिनँ।
म काम पनि बिगार्छु। मुमाले मन नपराउने कामहरू पनि गर्छु। देख्नेहरूले पोल सुनाइहाल्छन्। गयो, हपाई खायो, आयो। मुमाको हपाई साह्रै मिठो हुन्छ। हपाईभित्र जुन स्नेह, माया र ममता हुन्छ, त्यो केहीमा हुँदैन।
‘…त्यसो नगर् न,’ रिसाउनुहुन्छ, मुमा। ‘हुन्छ, गर्दिन हौ,’ मज्जैले भन्छु र हॉंस्छु।
म त यति प्यारी मुमाको अट्टेरी छोरा पो हुँ।
मलाई मुमाको यस्तो कुरामा अचम्म लाग्छ।
मुमाको अनुभव रहेछ, जीवन भनेको सम्झौता गरेर जिउनुपर्ने कुरा हो।
‘मैले ठानेको जीवन मैले बॉंच्न खोजेको भए म जीवन भेट्ने थिइनँ,’ बोलिरहिन् मुमा,‘जीवन त कतिबेला भेटिन्छ भन्ने कुरा नै थाहा हुन्न।’
जीवनबारे त जीवन भोग्नेहरूले नै भन्न सक्दारहेछन्। मुमाको कुरा सुन्दै जॉंदा म बुझ्दै जान्छु, म त अहिले जीवनबारे बोल्ने मान्छे होइन रहेछु।
‘अनुमान लगाएर जिउने कुरा होइन जीवन,’ भन्नुहुन्छ मुमा, ‘जीवनको धागो कहॉं खुस्किन्छ, कहॉं गॉंठो पर्छ बताउन कसले सक्छ?’
मुमाले पनि सम्झौता गरिन्। पाउनुभन्दा धेर गुमाइन्। गुमाउनुभन्दा धेर पाइन्।
के पाइन्? के गुमाइन्? यसको उत्तर मुमाको परिवारिक जीवन र कवितीय जीवनभित्र नै छ।
मुमाको मुमा पवित्र राई धेरै स्ट्रिक्ट। तर गरिब दुःखीलाई हेर्ने। बाबा हर्कबीरचाहिँ धेरै सोझो। बाजेले गाली गरेको मुमालाई याद छैन। मुमाहरू चार बहिनी। एक दाजु। बिहान निक्कै अबेरसम्म सुत्यो भने,
‘गधे लोग, उठो’ भन्नुहुन्थ्यो रे बाजेले। मुमालाई यत्ति थाहा रहेछ।
‘अहिले त सप्पै गइसके,’ आँखामा कुनै नैराश्य नदेखाई भन्नुहुन्छ मुमा, ‘बॉंचेको मै मात्र हुँ।’
गर्ल्स हाई स्कूल पढ्दै थिइन्। आफू 13 की इत्रु फुच्ची। सातमा पढ्दैगरेकी। क्लासमा बाह्र साथी थिएछन्, उस्तै उमेरका। साहित्यकार पारसमणि प्रधानले अङ्ग्रेजी सेनामा महिला भर्तिको ठेक्का पाएछन्। ‘केटीहरू जानुपर्छ,’ भर्ति के हो भनेर नजानेकी मुमाको क्लासको 12 जना छात्रामाथि आदेश भयो।
‘के हो हो जस्तो लाग्यो पहिले त,’ सुनाइन् मुमाले, ‘केटीहरू पनि चम्किए। हामी रॉंची गयौँ। 1944 सालमा।’
भर्तिको डाइरेक्टरचाहिँ कालेबुङमा बसेका डा. ग्राहम्स होम्सकी छोरी साइँली, मिसेस वर्लिङलाई मुमाको बाबाले सोधेछन्, ‘पछि रिटायर्ड भएर के गछेर्र्, यल्ले?
‘त्यतिखेर सोह्रको त थिएँ नी म,’ सुनाउँछिन् मुमा, ‘बङ्गाली आइमाईहरूले कम माया गर्थेनन्। नानी भन्थे, काखमा राख्थे।’
1947 मा भर्ति भङ्ग भयो। त्यही वर्ष अङ्ग्रेजहरू हारे। भारत स्वाधीन भयो। मुमा पनि फर्किइन्।
मुमाले 44 का ती नै दिनहरू सम्झिएर 46 मा कविता लेखिन्। त्यसको शीर्षक ‘मन’ थियो।
‘त्यसरी आइरहने, राजनीति, साहित्य र अरू ज्ञानगुणका कुराहरू गरिरहने,’ मुमा विगततिर गइन्, ‘मलाई पनि लेख्न हौस्याइरहने।’
युवकको घरमा कोही थिएनन्। दाजुहरू बाहिर थिए। मुमाबाबा बितेका। घरमा एक्लै बस्ने युवकको अर्को घर थियो भने मुमाको घर थियो। मुमाको घरमा आएर युवक मुमालाई ट्युसन पढाउँथे। मुमामाथि चढेको म्याट्रिक गर्ने भूत जो थियो।
मुमाले देखिन् सुतिरहेका। बिरामी पर्दा पानी तताएर दिने पनि कोही नभएका। पानी तताइन्। डाक्टरले जॉंचे। खाजाभुजा बनाइदिइन्। यो क्रम जारी रह्यो।
‘तिनलाई पनि मेरो सहयोगको बानी पर्यो,’ मुमाले सम्झिन्, ‘हामी नजिक भयौँ।’
बुबाको घरमा देवरहरूले तिनलाई ‘अजातकी’ भन्थे। तिनको मन दुख्दैन थियो। दुख्यो भने पनि देखाउँदैन थिइन्। दुःख नदेखाउने पनि बानी बस्यो। मन पोख्ने एउटा ठाउँ थियो मुमाको, कविता। बुबासित गएपछि मुमालाई लाग्यो, अब जीवन भेट्ने ठाउँ यही हो। तर तिनले त्यही घरमा कविता पनि भेटिन्। भेटेका कविता लेखिन् तर छापिनन्। मुमाका कविताहरू पढ्दा तिनको जीवन छर्लङ्गै हुन्छ।
मुमाको जीवनको सार नै यति नै हो।
दुइ छोरा दुइ छोरी। बुबा। छर छिमेक। आफन्त। कर्तव्य। यी जम्मैले मुमालाई कवितादेखि टाडा लग्यो जीवनदेखि नजिक। बुबासित पर्याप्त सम्पति पनि थिएन, अभाव पनि थिएन। नानीहरूलाई जुन कर्म, संस्कार र जीवन दिनुथियो त्यो कविताभन्दा सुन्दर लाग्थ्यो। आफैलाई कविता मान्थिन्। जसरी कविता पाठकमा पसेर जीवनबारे बोल्छ, उसरी मुमा परिवारमा पसिन् अनि जीवनबारे बोलिन्। समाजमा पसिन् अनि जीवनबारे नै बोलिन्।
बुबा अलिक छिटो रिसाउने। पॉंच मिनट खाना ढिलो भयो भने खाना नै फर्काइदिने। मुमालाई बुबाको चित्त दुखाउन राम्रो कहिल्यै लागेन। किनभने मुमाले बुबालाई जत्ति चिन्थिन्, उत्ति त बुबाका पाठकहरूले पनि चिनेनन्। तिनी जान्दथिन्, बुबा अब परिवारको मात्र होइन सारा नेपाली संसारका भए। समाजका भए। बुबासित परिवारको भन्दा धेर नेपाली समाजको सुर्ता छ। साहित्यको, भाषाको, समाजको सुर्ता बोकेर आफैसित लड्ने बुबालाई घरेलु कुरामा अल्झाइराख्नु मुमालाई कहिल्यै राम्रो लागेन। यसैकारण तिनले घर सम्हालिन्, बुबाले साहित्य र समाज सम्हाले। भाइचन्द प्रधानले नेपाली साहित्यमा जुन ठाउँ बनाए, त्यसको लागि मुमाले जीवन नै लगानी गरिन्। मुमाले जीवनमा पाएको सन्तुष्टिभित्र यो सङ्घर्ष पनि पर्छ।
‘मलाई घरमा कवि भएर बस्न मुनासिब लागेन,’ भन्छिन् अहिले पनि, ‘स्वास्नी, मुमा, बुहारी भएर निभाउनुपर्ने जुन जुन कर्त्तव्य थियो, मेरोलागि त्यही प्रमुख थियो।’
राईनी भएपनि हिन्दूको प्रभावमा हुर्किएकी मुमालाई घरमा पूजा गर्न मन लाग्थ्यो। बुबालाई पूजापाठ मन नपर्ने।
कोही बेला उनलाई आफ्नो निर्णय गलत हो कि भन्ने पनि लाग्थ्यो तर जब काखमा नानी र समाजमा बुबाको सफलता सामु हुन्थ्यो जीवन रङ्गीन लाग्थ्यो। रहेको जति पनि पीडा मनमा हुन्थ्यो, त्यो नै कविता बन्थ्यो। ‘मनपीडा’ त्यही पीडाका कविताका सङ्ग्रह हो। रोदन, महादान, व्यथा छ, जल्नदेऊजस्ता कविताले मुमालाई बुझ्न सबैलाई सहयोग गर्ला।
जीवन आफ्नै हातले चलाउने मुमालाई लाग्थ्यो, बुबाको कामले मात्र परिवार चल्दैन। यसो सोच्ने भएदेखि जीवनको जस्तै जटिल हिसाब पनि मिलाउँछु भन्ने लाग्यो।
पहिलो स्वास्नी, दोस्रो मुमा र तेस्रो गुरूमुमा।
पहिलो र दोस्रो भूमिका त तिनले निभाइरहेकै थिइन्, जब तेस्रो भूमिका निभाउन हिँडिन् घरबाहिरको समाजसित जम्काभेट भयो। 1964 मा तिनी जुबिली स्कूलकी नेपाली भाषा पढाउने गुरूमुमा भइन्। ठाकुरबाढीमा रहेको अङ्गेरजी स्कूललाई हिन्दी रहेको जुबिलीमा लगेपछि तिनले देखिन्, पढ्ने नेपाली, स्कूल हिन्दी।
जोरजबरजस्तीमा पढाउन त थालिन् तर बिस्तारै मुमालाई ‘हिन्दी विरोधी’ भन्न थालियो। स्वाधिन भारतमा हिन्दी विरोधी हुनु निक्कै ठूलो आरोप थियो।
‘हिन्दीमा नै आइए गरेको म,’ भन्नुहुन्छ मुमा, ‘मैले नेपाली भाषाको माग गरेँ भनेर प्रताडना शुरु भयो।’
आफ्नो भाषामा आफ्नै ठाउँमा पढाउन नपाउनु, विद्यार्थीहरूले पढ्न नपाउनु, उनको लागि मुनासिब कुरा भएन। भाषाप्रेमी मुमाले 1954 देखि सम्पादन गरेको ‘नवप्रभात’-पत्रिकाको एउटा सम्पादकीयमा ‘नेपाली भाषालाई सरकारले मान्यता दिनुपर्छ’ भन्ने आशय लेखिन्।
मुमाले हिन्दी स्कूललाई नेपाली बनाउने आन्दोलन गरिरहँदा देशभरि नै गोर्खाहरूले भाषा आन्दोलन शुरु गरिरहेका थिए।
मुमालाई लाग्थ्यो हिन्दी जुबिलीलाई ‘नेपाली’ बनाउनुपर्छ। मुमाको यो कुरा थाहा पाएदेखि प्रधान अध्यापक चिडिन थाले।
विद्यार्थी ल्याउने, पढाउने काममा दत्तचित्तले लागेको मुमालाई यो कुरा पचेन। भनाबैरी चल्यो। राईनी झोंक बाहिर निस्कियो। मुमाले हानिन् प्रधान अध्यापकलाई झापट। हालिन् जेल।
त्यिसबेला पहाडका नेता देवप्रकाश राई राज्यमा मन्त्री थिए। मुमाले तिनीसित कुरा राखिन्। त्यसपछि 1968 मा हिन्दी जुबिली भयो नेपाली।
‘जीवन भनेको सङ्घर्ष हो मनोज,’ अब मुमाले मेरो प्रश्नको उत्तर दिन थालिन्, ‘जीवन पाउनु र गुमाउनु दुइटैमा छ।’
व्यक्तिगतरूपमा मुमालाई पाउनुमा भन्दा दिनुमा मजा लाग्छ।
मुमाका उत्तरहरूले मलाई धेरै टाडो पुर्याउँछ। कविताबाट टाडिएकी मुमाले साहित्यलाई जति दिएकी छन्, त्यो अभावमा नै त दिएकी हुन्। भारतीय नेपाली साहित्य निर्माणमा आफ्नो हिस्साको योगदान मुमाले मज्जैले दिएकी हुन्। त्यही संस्कार थियो र त आज हामी लेखिरहेका छौँ। मुमाहरूले बिज रोपेकी थिइन् र त्यसको सियॉंलमा छौँ हामी। मुमाको कविता पढ्दा पनि उबेलाको समयलाई मज्जैले चिन्न सकिन्छ। चिनेर भन्न सकिन्छ, ‘स्वच्छन्दवादीहरूले हिँडेको त्यो बाटो अहिले पनि त छ, जहॉं उभेर हामी भनिरहेका छौं, भारतीय नेपाली साहित्यिकले ‘भारतीय नेपाली’-को समय, जीवन र समाजबाट ‘विचार’ टिपेर देखाउनेहरूको हूल कति सानो छ। त्यो हूल विकासौँ।’
मुमालाई अहिलेको माहौल लोभ लाग्दोरहेछ। तर नारी लेखकहरूको अभावमा सुर्ता पनि गर्छिन्। अहिले लेखकीय उचाइँ अग्लिएकोमा रमाउँछिन्। युवा पुस्ताको सक्रियतामा हर्षित बन्छिन्।
‘अघि अघि कविता घुुमाउरो हुन्थ्यो। लेखनाथ ‘सुगा’ भन्थे। ‘सुगा’ त जनता रहेछ,’ भन्नुहुन्छ, ‘अहिले राणाहरू छैनन्। सरकार छ त्यसको ठाउँमा। तर अचेल कविता त्यस्तो घुमाउरो छैन।’ मुमालाई पनि कवितीय मर्यादा नमारी कविहरूले ‘जनता’-लाई उठाउने कविता लेखेको मनपर्दोरहेछ। चेतना निर्माणमा कविताले काम गरिरहेकोमा सन्तोष लागेको रहेछ।
7 जनवरी दगुर्नेछ गोरूबथान